Soo dejisan Clean Master 7.4.6 – Android – Vessoft
AndroidNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaClean Master
Bogga rasmiga ah: Clean Master
Master nadiifi – sahlan ah in la isticmaalo software si nadiif ah oo ay tayadoodii nidaamka. Software wuxuu kuu ogol yahay in laga baarayo iyo tirto faylasha APK aan loo baahnayn, kayd codsiyada, files haraaga ah ama ku meel gaar ah iyo qashinka kale. Master Nadiifi u saamaxaaya in ay u falanqeeyaan sababaha kululaynta ee processor, codsiyada ay maamulaan in hab dedejiyey oo nadiif ah xasuusta qalliinka si loo kordhiyo waxqabadka hindisaa ah. Software ka kooban antivirus ka dhisay-in taas oo uu baaritaanku habka joogitaanka hanjabaad iyo bandhigayaa faahfaahinta nuglaanta of nidaamka. Master Nadiifi sidoo kale ku jira qaybo si gurmad ah files APK, guurto codsiyada in kaadhka xusuusta iyo saaro software aan la rabin.
Сleaning oo fiican nidaamka
Qaabka xawaaraha xusuus
Manager of codsiyada
Soo dejisan Clean Master
Faallo ku saabsan Clean Master
Clean Master Xirfadaha la xiriira
Link2SD – softiweer aad ku maareyso feylasha una ku gudbiso codsiyada kaarka xusuusta. Software-ka wuxuu ka kooban yahay aaladaha si toos ah loogu rakibo codsiyada kaarka SD.